Zimbabwe Hires Trump-Linked Lobbyists in Bid to End San...
Zimbabwe Hires Trump-Linked Lobbyists in Bid to End Sanctions
By Bloomberg• 7 March 2019
Brian Ballard, president of Ballard Partners Inc., stands for a photograph in Washington, D.C., U.S. Photographer: Andrew Harrer/Bloomberg
Zimbabwe hired U.S. lobbyists linked to President Donald Trump’s 2016 election race in a bid to have sanctions it says are hindering its economy scrapped.
The southern African nation, where the economy has all but collapsed after a series of disputed elections, took on Ballard Partners Inc. — run by Brian Ballard, a fundraiser for Trump’s campaign — according to Nick Mangwana, Zimbabwe’s secretary for information. Trump renewed sanctions against a number of Zimbabwean individuals and politically connected companies this week.
For more on Zimbabwe’s reaction to the renewal click here
In addition to Trump, Ballard has done work for Atiku Abubakar, a Nigerian presidential candidate previously blocked from entering the U.S. because of corruption allegations. The Zimbabwean contract, the first with a U.S. lobbying firm in more than a decade, is worth $500,000 a year, Politico reported.
Efforts to rehabilitate the Zimbabwean economy “include lobbying by our own businesses, citizens and professional consultants,” Mangwana said. “The biggest lobbyists should be the Zimbabwean people wherever they are, whose families are adversely affected by the debilitating sanctions imposed upon their motherland.” DM